Ukhokha malini ngezibalo zamahhala? | Martech Zone
Ukhokha malini ngezibalo zamahhala?
ULwesine, April 22, 2010 NgeSonto, Okthoba 4, 2015 Douglas Karr
UBarbara Jones webhulogi iStellar Thoughts wamenzela ingxoxo Izikhathi Zamasu ECRM i-podcast isebenzisa i-Skype. Ngihlatshwe umxhwele kakhulu yikhwalithi yomsindo (kuze kube sezinyonini ezixhuma ngemuva efulethini lami). Sixoxe analytics ngokuphelele nokuthi kungani umuntu ezokhokhela i analytics iphakheji.
IBarb isiza amabhizinisi amancane ngokuqaliswa, ukuthunyelwa kanye namasu we i-imeyili nokuphathwa kobudlelwano bamakhasimende (CRM) ebizwa nge-Infusionsoft. Angizange ngimboze zonke izizathu ezikwi-podcast kepha nazi ezimbalwa:
Iningi likhokhelwe analytics abahlinzeki futhi banikela ngokuqalisa nokuqeqesha futhi. Ukuvula okukhokhelwe analytics package efana neWebtrends ingakunika ithuba lokufinyelela emakhulwini emibiko. Ku-Google, kuzofanele ungeze futhi ushintshe amaphrofayli, futhi wakhe imibiko yakho yangokwezifiso. Akumnandi uma ungakaze wenze lolu hlobo lomsebenzi ngaphambili!
I-Google Analytics inokubambeka okungathi sína ekubanjweni kwedatha futhi inemikhawulo yokuthi ingathathwa kanjani idatha. Lokho ukukhubazeka okungathi sína lapho udinga ukuphendula ngebhizinisi lakho eliku-inthanethi.
Ngoba abazami ukuhambisana nesidingo, esikhokhelwe analytics abahlinzeki banezinsizakusebenza zokuqhubeka nokwenza ngcono imikhiqizo yabo. Ama-Webtrends, isibonelo, inokuhlanganiswa kweselula, i-Facebook analytics ukuhlanganiswa, ukulinganiswa kwemidiya yezenhlalo, i-data yezivakashi kanye neqoqo elinamandla lama-API wokudonsa nokudonsa idatha.
Iqiniso ukuthi kwesinye isikhathi mahhala kuza ngezindleko. Nge analytics, Ngikholwa ukuthi leyo ndleko ibalulekile kumabhizinisi aphakathi naphakathi angaba nomthelela omkhulu kwiqhinga labo lokukhangisa elingenayo uma bekwazi ukubona amathuba emali engenayo. Ngaphandle kwezimpendulo badinga ukwenza izinqumo ezinhle, bamane bachitha isikhathi nemali ngohlelo lokusebenza lwamahhala.
[umsindo: https: //martech.zone/wp-content/uploads/2010/04/WebAnalyticso-StellarThoughts.mp3]
Tags: amanani wengeze-enqoleni yeselulaSesha Marketingibhukumaka yomphakathi
Akukaze Kulula Njengabalandeli Nabalandeli
Inini Ingqungquthela Yakho Elandelayo E-inthanethi?
Ngo-Apr 22, i-2010 ku-6: 41 AM
Ngicabanga ukuthi amathuluzi wamahhala alungele amafemu amancane adinga ukuqondiswa okujwayelekile kokumaketha kwawo. kepha lapho ifemu iba nkulu, batshala imali ethe xaxa ekumaketheni kwabo, kulapho izibalo zabo zidinga ukubanzi